सेमील्ट विशेषज्ञले कसरी वेब स्क्रैपिंग प्रयोग गर्न बताउँछ
आज वेब खोजकर्ताहरूले विभिन्न परियोजनाहरुमा धेरै परियोजनाहरु खोज्न को लागी आफ्नो परियोजनाहरु लाई पूरा गर्न को लागी प्रयास गर्दछ। र रोचक नतिजाहरू आउनुहोस् जुन तिनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ. त्यसो गर्नका लागि, तिनीहरू वेब स्क्रैप इन्जिन प्रयोग गर्छन्. यो नयाँ र उत्कृष्ट प्रविधिको हो, जसले तिनीहरूलाई स्वचालित रूपमा विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट जानकारी सङ्कलन गर्न मद्दत गर्दछ. यस तरिकाले, उनीहरूले म्यानुअल रूपमा सबै काम गर्न बिना महत्त्वपूर्ण डेटाको ठूलो बैंकहरू संकलन गर्न सक्छन्. निम्न वेब स्क्रैपिंग कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक हो - dibujos de cameras profesionales mexicanos.
वेबसाइटहरु लाई स्क्रैप कसरि गर्नुहोस
यदि तपाईं संपर्क विवरण या उत्पादनहरु को मूल्यहरु या कुनै अन्य सूचिहरु लाई स्क्रैप गर्न चाहते हो, उनि वेब ब्राउजर को उपयोग गर्न को आवश्यकता हो. वेब स्क्रैपिंग प्रयोग गरेर, काम केवल एक कोड सिर्जना गरेर ('स्क्रैपर' को रूपमा पनि भनिन्छ). यो खरानी वेब खोजीकर्ताहरूको लागि सबै काम गर्दछ. उदाहरणका लागि, यो सबै सान्दर्भिक जानकारी खोज्न प्रयोगकर्ताहरू बहुविध कागजातहरूमा खोज्न र तिनीहरूलाई ढाँचामा बदलिन्छन्. यी डाटा तस्बिरहरू, पाठहरू, उत्पादन वस्तुहरू, इ-मेलहरू, फोन ठेगानाहरू, मूल्यहरू र अन्यको रूपमा हुन सक्छ.
महत्त्वपूर्ण कुरा थाहा पाउनका लागि
जो व्यक्ति वेबसाइटहरु लाई स्क्रैप गर्न चाहानुहुन्छ त्यो थाहा छ कि प्रत्येक वेब पेज फरक छ र यसमा यसको सर्त र शर्तहरु छन्. उदाहरणका लागि, केहि वेबसाइटहरूले समय समयमा समयमै उनीहरूको लेआउट परिवर्तन गर्न सक्छन्. यी सबै परिवर्तनहरूको साथमा धेरै प्रयास र धेरै घण्टाको काम चाहिन्छ. नियमहरू पछ्याउन वेब खोजीकर्ताहरू पनि सावधान रहनुपर्छ. अन्यथा, तिनीहरूसँग समस्या हुन सक्छ. यसो गर्दा, तिनीहरू सम्पूर्ण चारैतिर भित्रका सामग्रीहरू इन्टरनेट वरपर विभिन्न वेबसाइटहरूबाट प्रतिलिपि गर्न सक्नेछन्.
सबै प्रासंगिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्
वेब स्क्रैपिंगले व्यापारका लागि केहि प्रभावकारी औजारहरू प्रदान गर्दछ र व्यक्तिहरूलाई बजार अनुसन्धान गर्न. यी विशेष उपकरणले तिनीहरूलाई उनीहरूको कामको लागि सबै आवश्यक डेटाहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ, तिनीहरूलाई राम्ररी विश्लेषण गर्नुहोस् र परिणामहरू खोज्दै जान्छ. नतिजाको रूपमा, उनीहरूले आफ्ना प्रतियोगीहरूलाई पराजित गर्न सक्छन् उनीहरूले कुनै पनि समयमा आफ्नो बिक्री बढाउन सक्छन्. वेब स्क्रैपिंग उपकरण प्रयोग गरेर, तिनीहरू निर्माताहरू वा आपूर्तिकर्ताहरूको विभिन्न सूचिहरू भण्डारण गर्न सक्छन्, साथसाथै उत्पादनहरू र फाइलमा भण्डारण गरिएको थप.
यी प्रभावकारी स्क्रैपिङ उपकरणहरू प्रयोग गरेर वेब ब्राउजरहरू वास्तवमा अफलाइन पढ्नका लागि बहुविध डाउनलोडहरू डाउनलोड गर्न सक्छन्।. यसले उनीहरूलाई धेरै समय बचत गर्न सक्छ र त्यसपछि तिनीहरूले उनीहरूलाई पढ्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको कम्प्यूटरको सान्त्वनाबाट मात्र एक बटन थिच्न सक्छ. यसले तिनीहरूलाई यी डाटाहरू म्यानुअल रूपमा पत्ता लगाउन प्रयास गर्ने घण्टा बचत गर्दछ. नतिजाको रूपमा, तिनीहरू सक्रिय वेब जडानहरूमा कम निर्भर छन्, किनकि उनीहरूले उनीहरूको स्रोतहरू पछि पढ्न सक्छन्.
सम्भावना कार्मिक पत्ता लगाउनुहोस्
आज धेरै जना प्रबन्धकहरूले विशेषज्ञ उम्मेदवारहरू पत्ता लगाउन खोज्छन् कि उनीहरूको टोली वा नौकरी चाहने व्यक्तिहरू जो एक विशेष रिक्तिकाको लागि व्यक्ति खोज्ने प्रयास गर्दै छन्।. यी उपकरणहरू प्रयोग गर्दा, उनीहरूले सजिलै मान्छेहरूलाई चाहन सक्छन्.
मार्केट उत्पाद मूल्यहरू फेला पार्नुहोस् तुरुन्तै
यदि तिनीहरू केहि उत्पादहरूको मूल्यहरू ट्र्याक गर्न खोज्दै छन्, वेब स्क्रैपिंग प्रयोग गरेर उनीहरूले स्वचालित रूपमा फेला पार्न सक्छन्. वेब स्क्रैपिंगले उनीहरूलाई धेरै अनलाइन भण्डारहरू र मार्केटहरूको आवश्यक सबै मूल्यहरू ट्रयाक गर्न मद्दत गर्दछ.